'म त्यो कुनै पनि मनोरन्जन छैन': नेसा ब्यारेट Mads लुईस संग एक सम्भावित बक्सि match खेल को लागी प्रतिक्रिया - पप संस्कृति
'म त्यो कुनै पनि मनोरन्जन छैन': नेसा ब्यारेट Mads लुईस संग एक सम्भावित बक्सि match खेल को लागी प्रतिक्रिया
Nessa Barrett Mads लुईस विरुद्ध बक्सि considering विचार छैन। हलिवुड फिक्सको जून २५ मा यूट्यूब भिडियोमा, ब्यारेट प्रेमी जेडेन होस्लरको साथमा एक नाइट क्लबमा प्रवेश गर्ने प्रयासमा देखिएको थियो। रिपोर्टर उनीहरुलाई केहि प्रश्न सोध्न रोकियो।
नेसा ब्यारेटलाई 'काउन्टी .्ग क्राइम्स' को पछिल्लो म्युजिक भिडियोको बारेमा सोधिएको थियो। क्लबमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दा, रिपोर्टरले सोधे कि ब्यारेट वा होस्लरले सम्भावित बक्सि match खेलको बारेमा कुनै टिप्पणी छ, नेसालाई सोध्न कि उनी कसैलाई बक्सि be गर्न चाहान्छिन्।
'म त्यो कुनै पनि मनोरञ्जन छैन।'
यस बर्षको शुरूमा लुईस र होस्लरको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि नेसा ब्यारेट र मैड्स लुईस मित्रताका हिसाबले चट्टानमा थिए भन्ने अटकलहरुको बीचमा यो प्रश्न आएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्: किन केन्या वेस्ट वालमार्ट विरुद्ध मुद्दा दायर गर्दैछ? सबै तपाइँ 'knockoff' Yeezy स्नीकर्स को बिक्री मा दायर मुकदमा को बारे मा जान्न आवश्यक छ
Nessa Barrett र Mads लुईस अफवाह मिल
यस बर्षको शुरुमा, म्याड्स लुईस र नेसा ब्यारेट, पहिले सबैभन्दा राम्रो साथी घोषित, जेडेन होस्लर को बिबाद मा थिए। 'ला डि डाई' म्यूजिक भिडियोमा सँगै देखा परेपछि, नेसा ब्यारेट र जेडेन होस्लरले आधिकारिक रूपमा उनीहरु डेटि announcedको घोषणा गरे।
यसले मैड्स लुईसलाई ब्यारेटलाई नराम्रो साथी भएको आरोप लगायो, यो आरोप संग कि उनले लुईसलाई 'भयानक' व्यवहार गरे। जुन १२ मा YouTubers र TikTokers को बीच बक्सि match खेल पछि, Mads Lewis TikTok मा एक भिडियो अपलोड गर्नुभयो।
भिडियो पढ्छ 'तपाइँ मलाई बक्स गर्न चाहनुहुन्छ' र 'केटी बनाम केटी बक्सि match म्याच।' भिडियो को वर्णन एक केन्या वेस्ट स्वीकृति भाषण बाट लिईएको आवाज संग 'एक केटी बनाम केटी मुक्केबाजी मिलान को लागी याचिका' पढ्छ जहाँ उनी भन्छन् 'सबैजना जान्न चाहन्छन् कि यदि म जित्न सकिनँ भने म के गर्छु, मलाई लाग्छ हामी गर्छौं। कहिले थाहा छैन। '
जून १th मा केभिन वोongको युट्युब च्यानलमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा, मेड्स लुईसले भनिन् कि उनी 'केहि पनी पुष्टि गर्दैनन्,' जब उनी सोध्छिन् कि उनी नेसा ब्यारेटसँग लड्न जाँदैछिन्।
किनारा को वास्तविक नाम हो
जे होस्, जब सोध्नुभयो कि म्याड लुईस ब्यारेट संग लड्न विचार गर्दछन्, उनले हो भनिन्।
यो पनि पढ्नुहोस्: Tabitha ब्राउन मसाला: रिलीज मिति, जहाँ किन्न र तपाइँ सबै शाकाहारी टिकटक स्टार को McCormick Collab को बारे मा जान्न आवश्यक छ।
हाल, त्यहाँ एक सम्भावित बक्सि match खेल मा कुनै पनि पार्टी बाट कुनै अन्य टिप्पणी भएको छ। यदि नेसा ब्यारेटले यो विचारलाई मनोरञ्जन गर्न अस्वीकार गरे, सारा-जेड ब्लेउ, मार्ली एस्टिभ्स र आजरा मियाँ जस्ता अन्य धेरै टिकटक स्टारहरुले भने कि उनीहरु पन्जा लगाउन रुचि राख्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्: 'के उनी ज्याक हार्लोलाई डेटिn't गर्दिनन्?': एडिसन रायले मेशिन गन केलीको गिटारवादक ओमर फेदीसँग डेटि to गर्ने हल्ला चलेकोले प्रशंसकहरुले प्रतिक्रिया जनाए।
Sportskeeda लाई पप संस्कृति समाचार को कवरेज सुधार गर्न मद्दत गर्नुहोस्। अब ३ मिनेट सर्वेक्षण लिनुहोस्।
कसरी झूट पछि एक विवाह तय गर्न
सम्बन्ध मा सीमा को अर्थ के हो
जब एक विवाहित पुरुष टाढा जान्छ
संसार परिवर्तन गर्ने १० तरिका
बीटीएस कति पैसा कमाउँछ
श्रीमतीले बिहेमा काम गर्न अस्वीकार गरे